I-Polyethylene eneChlorini, i-PVC yokuQinisekiswa koGawulayo, ukupeyinta i-Emulsion-Dehua
I-Polyethylene echongiweyo (CPE)
I-PVC Calcium kunye neZinc Stabilizer
Ukuqhutywa koNcedo lweAcrylic
Izixhobo zokwaleka kumashishini
Ipeyinti ye-Emulsion kunye neAnit Izinto ezonakalisayo
Iplastiki yasemanzini kunye nepeyinti yeRubber Emulsion
I-Emulsion yomthi wamanzi e-Waterborne
Ukukhawulezisa ukuSebenzisa ngokuNgcolileyo uMgangatho wePlanga
Ukudityaniswa kwamashishini okuDibanisa kubandakanya
Irabha yeChlorinated (CR), iPhylithini ePhakamileyo yeChlorinated (HCPE), iChlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)
Ipeyinti ekhethekileyo ye-1 echasayo: ipeyinti yaselwandle, ipeyinti yesikhongozeli, ipeyinti yokulwa umhlwa
Ipeyinti 2.Fire nekudodobalisa, idangatye nekudodobalisa ipeyinti, ukutyabeka ngaphandle komthi kunye nesakhiwo sentsimbi.
Ukutyabeka 3.Ukwakha, ukuhonjiswa kwesakhiwo, ikhonkrithi ngaphandle kwepeyinti yokuqala.
Ipeyinti yokumakisha kwendlela: ukupeyinta isikhululo seenqwelomoya, ipeyinti yokumakisha, ipeyinti yokumakisha indlela kunye nepeyinti ekhombisa indlela.
5.Adhesive: ubukhulu becala esetyenziselwa ukudibanisa iimveliso ezahlukeneyo zepvc ezifana nokufakwa kwepayipi yePVC, iprofayile yePVC.
6.Ukuprinta inki kunye nezinto zokuncamathelisa.
Izongezo zePVC ezibandakanya
I-Polyethylene eneklorin, i-PVC Calcium kunye ne-Zinc Stabilizer, i-Acrylic Processing Aids, i-Acrylic Impact Modifier （AIM）, Ukuthambisa iAcrylic yokuNceda uNcedo lweemveliso zePV, AS Resin
I-Polyethylene yeChlorinated isetyenziselwe ukuguqula impembelelo, kwiprofayili engqongqo ye-PVC, iipayipi, izixhobo zombhobho kunye nepaneli ukuphucula amandla empembelelo yeemveliso ezigqityiweyo ze-PVC.
I-Polyethylene yeChlorinated yerabha (i-CM) isetyenziswa ngokubanzi njengemicu yokutywina ifriji, amakhadi ombane kunye njl.
Nelangatye ABS ukumelana.
2.I-PVC Calcium kunye neZinc Stabilizer, ukuqhubekeka kokunceda ekuqhubeni i-resin yePVC, ukuya kuthi ga ngokugqibeleleyo umphezulu. Uzinzile kakuhle. Ukumelana ne-UV kunye nokumelana nemozulu.
3.Ukongeza uncedo lwe-acrylic lokulungisa kwiimveliso ezingqongqo zePVC ukuphucula amandla oqinileyo, iipropathi zomzimba kunye nokukhanya komphezulu.
4. Uncedo lwe-Acrylic yoNcedo lwePVC ukukhawulezisa i-gelation, ukwandisa amandla obushushu kunye nokwandiswa, umphezulu kunye nokugcina umngxunya omncinci wegwebu ungazinzisi kumngxunya omkhulu.
Iplastiki yasemanzini kunye nepeyinti yepeyinti Emulsion, Amanzi aManzi eLacquer Emulsion, Amanzi abhalwe ngeMetallic Paint Emulsion.
Zonke iintlobo ze-emulsion zisetyenziselwa izinto zokuqala zoMzobo weplastiki kunye nerabha, iglasi, isinyithi, ukhuni, i-Acrylic okanye i-ABS njl.njl. ukumelana namanzi, ukumelana nemozulu kunye nokubambelela.
Iikhemikhali zemveliso yobungcali kangangeminyaka engama-22.
Weifang Dehua entsha Polymer Material Co., ltd yasekwa ngo-1999 ngonyaka, nto leyo mveliso mveliso yobungcali yemichiza kunye nenkqubo esemgangathweni yolawulo lomgangatho ophezulu kwaye ingqinisisiwe isiqinisekiso ISO 9001 ngo-2002. Iziko lophando oluphezulu oluphezulu kunye namaqela olawulo kunye neendawo zokuvavanya ziya kunceda ukwanelisa iimfuno zabathengi ngokuchanekileyo nangokukhawuleza.
Enye iWebhusayithi yethu www.ikumaki.com